Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဒေါက်တာ ဇာနည် သို့မဟုတ် အလုပ်ပြုတ်မှာ စိုးရိမ်နေရသော ငွေနောက်လိုက်နေသူတစ်ယောက်
by James Mmt on Thursday,3November 2011 at 18:01 ·
ရိုးရိုးသားသားနဲ့ တိုးရစ်ဂိုက်ကို တကယ်မြတ်နိုးလို့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူတွေနဲ့မတူပဲ ပိုက်ဆံအရလွယ်လို့ တိုးရစ်ဂိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာဇာနည်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း သိလိုက်ရပါတယ်။ ပြည်သူတွေ လွတ်လပ်စွာ လှုံ့ဆော်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို သူ့နေရပ် သူပြန်ဖို့ ကိစ္စ၊ BBC နဲ့ Anna Jones ကိုတောင်းပန်ဖို့ Petition ကို အမြင်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ နာဇီစိတ်ဓါတ် ရှိသူများလို့ ဝေဖန်လိုက်ကတည်းက လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်း ဆိုတာကိုတောင် နားမလည်တဲ့ ဒေါက်တာဇာနည်ဟာ အမေရိကားမှာ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေကို ထည်လဲသုံးခဲ့ပြီး အခုနောက်မှာ အမြှီးထုတ်ထားတဲ့ ဘွဲ့တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာဟာ ခါတော်မှီ လုပ်စားလို့ ကောင်းမှာမို့လို့ ယူတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်မှာ ရာထူးမြဲချင်တော့ ဒေါ်စု ရှေ့ဆက်နေတဲ့ လမ်းစဉ်ကိုလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုသုံးပြီးတော့ အဲ့ဒိလို ဟိုဘက်ယိမ်းလိုက် ဒီဘက်ယိမ်းလိုက်ဆိုတော့ ဒေါက်တာ ဇာနည့် နေရာကို ၀င်ယူချင်တဲ့ ဒေါက်တာဇာနည်ထက် အဆပေါင်းများစွာ တော်တဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံက ပညာရှင်တွေကို ခဏ ခေါက်ထားနိုင်တာပေါ့။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ကိုယ့်အခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ကြိုးစားလုံးပန်းပြီး လက်ရှိအလုပ်ကလေး မပြုတ်သွားရေးဟာ မြန်မာပြည်သူလူထု အရေးထက်ပိုပြီး ဒေါက်တာဇာနည်အတွက် အရေးကြီးလေတော့ Long Live Rohingya လို့ထပြီးတော့ ဟစ်တလာရဲ့ Long Live Nazi ကိုအားကျစွာနဲ့ ကြွေးကြော်လာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ပန်းတိုင်ကိုပဲ ဆက်လက်သွားဦးမှာပါပဲ... မြန်မာပြည်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းမှာတော့ ဖျက်မရတဲ့ အစွန်းအထင်းနဲ့ နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ ဒေါက်တာဇာနည်ရဲ့ ရှေ့ကို ဒယီးဒယိုင်ဆက်နေမဲ့ ခြေလှမ်းတွေကိုလည်း တွေ့နေကြဦးမှာပါ။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ကတော့ ဒေါက်တာဇာနည် ဖြစ်စေချင်တဲ့ Rohingya တွေကို အဓွန့်ရှည်စေဖို့အတွက် ဒေါက်တာဇာနည်ရဲ့ ချစ်လှစွာသော ရင်သွေးလေးကိုပါ ရိုဟင်ဂျာများနဲ့ သွေးနှောစေခြင်းအားဖြင့် ဒေါက်တာဇာနည်ကဲ့သို့သော မျိုးဆက်များပြန့်ပွားသင့်ရန် ကြိုးစားသင့်ကြောင်းလည်း အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံရမယ်ဆို ဘ နဖူးတောင်သိုက်တူးယုံမက အမျိုးသားရေးပါ သစ္စာဖောက်ရဲတဲ့ ဒေါက်တာဇာနည့်အတွက် မပြောပလောက်တဲ့ စွန့်လွှတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သလို ဒေါက်တာဇာနည် ကြွေးကျော်ပေးတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေအတွက် လက်တွေ့ကျတဲ့ ချီးမြှောက်မှု တစ်ခုလည်း ဖြစ်မှာပါပဲ.....
ဒေါက်တာဇာနည် ကင်ပွန်းတပ်တဲ့ Neo Fascist ဆိုတဲ့ကျွန်တော်လည်း ဒေါက်တာဇာနည် ရေးသလိုပဲ ရေးတတ်သလို ရေးကြည့်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် တောနယ်တစ်နယ်က မွေးဖွားလာတဲ့ စာမတတ်ပေမတတ် တစ်ယောက်ဆိုတော့လည်း အရေးအသားက ပညာရှင်မဆန်ပဲ တောသားလို ဒဲ့ဒိုးဖြစ်တာတော့ ခွင့်လွှတ်ပါဗျား...... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီစာဖတ်မိသူများ ဒေါက်တာဇာနည်ကို လက်တို့နိုင်စေဖို့ ဒေါက်တာဇာနည်ရဲ့ လင့်လေးပါ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျား.. (http://www.facebook.com/profile.php?id=1795055329&sk=wall)
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 08:30
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဒေါက်တာ ဇာနည် သို့မဟုတ် အလုပ်ပြုတ်မှာ စိုးရိမ်နေရသော ငွေနောက်လိုက်နေသူတစ်ယောက် . All Rights Reserved